Last Updated on Wednesday, 03 August 2016 15:31
अषाढ, ८ -लखन आफूलाई आफूभन्दा अढाई सय वर्षअघिका सिद्ध लखन थापाका अवतार ठान्थे र सोही अनुसार प्रचार गर्थे । यस्तै देवी मनकामनाले जंग बहादुर राणाको हत्या गरी उनको ठाउँमा आफूलाई शासन गर्नू भन्ने आदेश प्राप्त भएको गाउँलेहरूलाई सुनाउँथे ।
गोरखाका राजा राम शाहका समयका सिद्ध लखन थापाले गुरु गोरखनाथ सँग दीक्षा प्राप्त गरेको, राजा राम शाहको कचहरीमा रहँदा उनले विभिन्न चमत्कार देखाएको, राम शाहका सन्तानले नेपाल जित्ने भविष्यवाणी गरेको, ईश्वरी महारानीको मन जिती उनी र उनको दरसन्तानले मनकामना देवीको पूजाहारीको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको आदि वर्णन ‘प्राचीन नेपालुको संख्या २८ ९ श्रावण २०३१:७–१६० मा प्रकाशित ‘गोरखा वंशावलीमा रोचक पाराले प्रस्तुत गरिएको छ । सिद्ध लखन थापाको अवतार हुनु र मनकामना देवीबाट आफूलाई आदेश भएको प्रचार हुनुले यी दोस्रा लखनले प्रशस्तै अनुयायी प्राप्त गरी जंग बहादुर राणाविरुद्धमा जनसमर्थन जुटाएका थिए ।
जंगेको हत्या योजना
जंग बहादुर राणाका छोरा पद्मजंगले लखनलाई मृत्यु दण्ड दिइएको २२ वर्षपछि भारतबाट आफ्ना बाबुको जीवनी प्रकाशमा ल्याउने उद्देश्यले सन् १९०९ मा प्रकाशित गरेको ‘लाइफ अफ महाराज श्री जंग बहादुर रत्न पुस्तक भण्डारद्वारा सन् १९७४ पुनः प्रकाशित पृष्ठ ३०२–३०४०मा प्रकाशित लखन थापा प्रकरण रेग्मी रिसर्च प्रालिले सञ्चालन गरेको ‘रेग्मी रिसर्च सेरिजुको वर्ष १२ अंक ५ डिसेम्बर १९८०स्७२–७५०मा प्रकाशित गरिएको छ ।
सो सेरिजमा प्रकाशित पद्मजंगको बयानअनुसार लखनले त्यस बेला एक हजार पाँच सय जनाको सशस्त्र समूह गठन गरेका थिए । सोही सेनाका प्रमुखलाई उनले राजधानी गएर जंग बहादुरको हत्या गरेर सत्ता कब्जा गरी नेपालमा सुनौलो इतिहास सुरु गर्न आदेश दिएका थिए ।
किल्ला र सैन्य संगठन निर्माण
लखन थापाको विषयमा खोजी र चर्चा गर्दै आएका अभियन्ताहरूले उल्लेख गरेअनुसार आफ्ना सहयोगीका साथ लखनले ढुंगाले घेरी बलियो किल्ला निर्माण गरेका थिए । उनले किल्ला परिसरभित्र मनकामना देवीको प्रतिमूर्ति स्थापना गरेका थिए । फौजलाई कवाज खेल्न, तारो हान्न तालिम सञ्चालन गर्न तथा खानेबस्ने बन्दोबस्त किल्लाभित्र जुटाएका थिए । ढुंगेधारा र पोखरी समेत किल्ला भित्र बनाइएको थियो ।
सेनालाई आवश्यक पर्ने हातहतियारहरू ६० नाल बन्दुक, ठूलो संख्यामा तरबार, खुकुरी, भाला, डन्डी, धनुकाँड, खुँडा र कटारीहरू समेतको बन्दोबस्त गरेका थिए । सेनालाई आवश्यक पर्ने रसदपानी आदिको व्यवस्था मिलाई जंग बहादुरविरुद्ध जनविद्रोह गर्न तयारी पूरा गरिसकेका थिए भनी त्रिलोक थापामगरले ‘राज्यसत्ता डट कम सन् २०११–०९–२३० मा उल्लेख छन् ।
रेग्मी रिसर्च सेरिजले पनि लखन थापा प्रकरणमा उनीबारे सरकारी सेनाले बुझाएको सूचना पनि प्रकाशित गरेको छ । सोअनुसार पाल्पाका मेजर कप्तान शमशेरजंग थापा क्षेत्री, सुब्बा वीरमानजंग थापा क्षेत्री र सुबेदार बुदलसिंह बस्न्यातले प्रसादसिंह थापा, खड्ग थापा र अन्य व्यक्तिबाट यस्तो सूचना पाए लखन थापा जुन घरमा बस्छन्, त्यो आठ क्युविट चौडा र १६ क्युविट उचाइको छ । त्यो घर एक प्रकारको किल्लाजस्तै छ । विसं १९३२ फागुन २६ मा लखन थापालाई बन्दुक र तरबारले सुसज्जित ठूलो संख्यामा सशस्त्र भोटेहरूले साथ दिएका थिए । उनीहरू जंग बहादुरको सैन्यमा भर्ना हुन जान लागेका थिए । त्यसको खास उद्देश्य जंग बहादुरलाई खत्तम गर्नु थियो ।
सरकारी सैन्यको सूचनामा लखन थापाको घरको नाप दिँदै उनको घरलाई किल्लाजस्तै भनिएबाट पनि लखनले जंग बहादुर राणाका विरुद्ध ठूलै तयारी गरेका थिए भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ । लखन थापाको विद्रोह दबाउने क्रममा उनीसहित अजप सिंह थापामगर लगायत १२ जनालाई पक्रेर बाँसको पिँजडामा राखी काठमाडौंको थापाथलीमा ल्याइयो । त्यहाँ उनीहरूलाई कायल गर्दा उनीहरूले दिएको बयान पनि रेग्मी रिसर्च सेरिजमा परेको छ । उनीहरूको बयानमा लखनले आफूहरूले सत्ता हात पारेपछि विद्रोहमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सेनाको विभिन्न उच्च पद दिने प्रतिज्ञा गरेका थिए ।
पद्म जंगको बयानअनुसार यो खबर जंग बहादुरले पाएपछि लखन लगायतलाई पक्राउ गर्न देवीदत्त पल्टनका सेना पठाए । उनीहरूको लखन थापाको सेनासँग केही बेर आमने सामने भयो । सानोतिनो लडाइँपछि ती विद्रोहीहरूले आत्मसमर्पण गरे । लखनसहित १२ जना समातिए । उनीहरूलाई बाँसको पिँजडामा राखेर काठमाडौं ल्याइयो । उनीहरूले आफूहरूले गर्न लागेको विद्रोह र जंग बहादुरको हत्याको योजना सम्बन्धी भेद खोले ।
लखन थापाले सुरु गरेको विद्रोहमा जहरे चुमी, जयसिंह चुमी मगर, विराज थापामगर, जुठ्या थापामगर, जितमान गुरुङ र अजपसिंह थापामगर नै बढी सक्रिय भएको हुँदा लखन थापासँग मृत्युदण्ड पाउनेहरू पनि उनीहरू नै हुन सक्छन् । मेजर कप्तान शमशेर जंग थापा क्षेत्री लगायतबाट लखन थापा सम्बन्धी खबर पाउनासाथ जंग बहादुर राणाले विसं १९३२ चैत्र सुदि १ मा पाल्पामा रहेका कर्णेल टेक बहादुर राणाको नेतृत्वमा लखन र उनका सहयोगीलाई पक्राउ गर्न सेना खटाएको ‘रेग्मी रिसर्च सेरिजुबाट स्पष्ट हुन्छ । उनलाई सहयोग गर्न उनै मेजर कप्तान थापा क्षेत्रीलाई आदेश दिइएको थियो । उनीहरूले लखनको घर घेराउ गरेर अजपसिंह थापामगर सहित उनका मानिसहरूलाई पक्राउ गरे । उनीहरूलाई काठमाडौंको थापाथली दरबारमा ल्याइयो । त्यहाँ उनीहरूले जंग बहादुरको हत्या गर्ने योजनाबारे स्पष्टै रूपमा बताए । ‘रेग्मी रिसर्च सेरिजुमा प्रकाशित उनीहरूको बयान यस्तो छः लखन थापाले हामीलाई जर्नेल, कर्णेल र कप्तानमा नियुक्ति दिने कसम खाएका छन् ।
उनले जहरे चुमीलाई जर्नेल, विराज थापामगर, जुठ्या थापामगर र जितमान गुरुङलाई कर्णेल पद दिएका छन् । प्रधानमन्त्री जंग बहादुरको हत्या गर्ने र यसपछि शाहज्यादा उपेन्द्र विक्रम राजा बन्ने र लखनचाहिँ उपेन्द्रका दोस्रा व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । लखनले तार्कु वा मनाङबेसीमा जंग बहादुरको हत्या हुनेछ भनेका छन् । यो योजना सफल भएन भने उनी तिब्बतीहरूको सहयोग माग्न तिब्बत जानेछन् र उनको यो योजना सफल भयो भने उनी राजा बन्नेछन् ।
लखन र उनका अनुयायीहरूको यस्तो बयान अनुसार जंग बहादुरदेखि असन्तुष्ट रहँदै आएका शाहज्यादा उपेन्द्र विक्रम शाहलाई राजा बनाउने थियो र आफूहरूको तात्कालिक योजना असफल भयो भने तिब्बतलाई गुहार्ने थियो । यसले बयानले जंग बहादुरविरुद्ध लखनको दरबारसँग पनि भित्रभित्रै साँठगाँठ थियो भन्ने अनुमानलाई बलियो बनाउँछन् । यस्तै तिब्बतमा गई गुहार माग्ने भन्ने बयानले पनि उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहयोग लिएरै भए पनि जंग बहादुरविरुद्धको अभियानलाई सफल बनाउने उद्देश्यका साथ विद्रोहमा होमिएका थिए भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ ।
सात विद्रोहीलाई मृत्युदण्ड जंग बहादुरका छोरा पद्म जंगको बयानअनुसार छानबिनपछि पक्राउ परेका १२ जनामध्ये लखन सहित सात जनालाई मृत्युदण्ड दिइयो र बाँकी पाँच जनाको त्यस घटनामा सक्रिय सहभागिता नदेखिएका कारण घर फिर्ता गरियो । इतिहासकार बाल चन्द्र शर्माले पनि पक्राउ परेका १२ मध्ये सात जनालाई मात्र मृत्युदण्ड दिइएको ‘नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा ९२०३३ः३४१० मा उल्लेख गरेका छन् ।
लखनसहित सातजना विद्रोहीलाई विसं १९३३ फागुन २ गते बुङ्कोटको काउले भँगारमा झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइएको खोजकर्ता त्रिलोक थापामगरले ‘इसमता डट कमु ९२०७२–११–०२० मा उल्लेख गरेका छन् । थापाले आफ्नो लेख ‘कप्तान लखन थापाको जनविद्रोहको नालीबेलीमा उल्लेख गरेअनुसार लखनको जन्म विसं १८९१ मा भएको थियो । हालसम्म लखन थापाको प्रसंगमा ‘उनीसहित जयसिंह चुमी मगर लगायतलाई झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइयो भन्नेमात्र पढ्न पाइन्छ ।
उनीसहित मारिने बाँकी को को थिए त ? यो प्रश्नको भरपर्दो जवाफ हालसम्म पढ्न पाइएको छैन । यस समस्याको समाधान गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ । पद्म जंगको बयानमा पक्राउ परेका १२ जनामध्ये सात जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको र विद्रोहमा कम सक्रियता भएका बाँकीलाई घर जान दिइएको प्रसंग परेकाले सात जनाले मृत्युदण्ड पाएको भन्ने तर्कलाई विश्वसनीय मान्न सकिन्छ । लखन थापालाई मृत्युदण्ड दिइएको घटनाको समयमा पद्म जंग २० वर्षका थिए । त्यसैले यस घटनाबारे उनमा चासो हुनु र यसबारे उनी जानकार हुनु सम्भव छ । इतिहासकार दिनेश राज पन्तले ‘पूर्णिमाको पूर्णांक ९३ वैशाख २०५५:३५० मा प्रकाशमा ल्याएको ‘कुण्डली संग्रहु अनुसार पद्म जंगको जन्म विसं १९१४ कात्तिक २८ गते भएको हो ।
‘रेग्मी रिसर्च सेरिजुले प्रकाशमा ल्याएको विद्रोहीहरूको बयानमा लखन थापाले सेनाका ठूलाठूला पद दिने प्रतिज्ञा गरेका व्यक्तिमध्ये जहरे चुमी जयसिंह चुमी मगरलाई जर्नेल, विराज थापामगर, जुठ्या थापामगर र जितमान गुरुङलाई कर्णेल पद दिइएको थियो । पक्राउ पर्दा लखन थापासँगै अजपसिंह थापामगर पनि पक्राउ परेको उल्लेख भएको हुँदा लखनका सक्रिय सहयोगी पनि यिनै व्यक्तिहरू थिए भन्ने अनुमानलाई बलियो बनाउँछ । यी विभिन्न तथ्य केलाएर हेर्दा लखन थापासँगै जंग बहादुर राणाबाट मृत्युदण्ड पाउनेमा जहरे चुमी जयसिंह चुमीमगर, विराज थापामगर, जुठ्या थापामगर, जितमान गुरुङ र अजपसिंह थापामगर नै थिए भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । एकजना व्यक्तिको नाम भने अझै अज्ञात छ ।
लखन थापालाई मृत्युदण्ड दिइँदा मर्नुअघि उनले ‘म मरेको एक सातामा जंगेको पनि मृत्यु हुनेछ भनी गरेको भविष्यवाणी प्रसिद्ध छ । संयोग पनि कस्तो भयो भने लखनलाई मृत्युदण्ड दिइएको एक होइन, दुई सातापछि जंग बहादुरको पनि मृत्यु भयो । ‘पूर्णिमा पूर्णांक ३३ भाद्र २०३२स्४६० अनुसार जंग बहादुरको मृत्यु विसं १९३३ साल फागुन १६ गते फागुन शुल्क द्वादशी उप्रान्त त्रयोदशीमा भएको हो । जंग बहादुर राणाविरुद्ध सशस्त्र विद्रोहको तयारी गर्नु सानो कुरा थिएन, त्यस बेला । गोरखाको बुङ्कोटमा भएको त्यस विद्रोहमा लखनले निकै ठूलो नैतिक र भौतिक सहयोग प्राप्त गरेका थिए । निकै ठूलो दबाबपछि लखन नेपालको प्रथम सहिद घोषित भए । उनीसँगै विद्रोह गर्दै मृत्युदण्ड प्राप्त गर्ने बाँकी ६ जनाचाहिँ सहिद होइनन् ? उनीहरूलाई पनि सहिद घोषणा गर्न माग किन नगर्ने ?
साभार :अन्नपूर्ण बाट
Last Updated on Sunday, 24 July 2016 04:43
Last Updated on Monday, 01 August 2016 06:39
हिजोआज भद्र सहमति, प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, काँग्रेसको नेतृत्वमा होइन केपी ओलीकै नेतृत्वमा ठीक छ, होइन प्रचण्डले भारतको गुलाम गरे यसरी नै केपी ओलीलाई राष्ट्रवादीको पगरी पनि गुत्थ्याइदैछ । केपी ओलीले केही गर्न लागेको देखेर सरकार ढाल्न लागेको जस्ता विषयले चर्चा पाइरहेको छ । प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरियो माओवादी–काँग्रेस मिलेर संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो । अहिलेको जल्दो बल्दो विषय वस्तु हुन् ।
एउटा असल नेतृत्वको अभावमा नेपालको शासन व्यवस्था जसरी अस्थीर घुमन्ते बाहुन क्षेत्रीहरु छन् । त्यसै गरी अस्थीर बनेको छ, यति मात्रै नभएर जन्मेदेखि बाजे भनि माग्ने चन्दने र कन्दनेहरुले नेतृत्व गरेका छन् । अझ भ्रष्टचारी, घुसखोरी, नैतिक पतन भएका, देश बनाउने सोच नभएकाहरु सत्तामा आसिन छन् । अझ विदेशी बाहुन क्षेत्रीले यो देशलाई हाक्नु नै दुर्भाग्य पूर्ण हो । देशले आज सच्चा नेतृत्व खोजेको छ । स्थिर नेतृत्व खोजेको छ र देशभक्त पनि । भिजन भएका राष्ट्र बनाउने जोश जाँगर भएका श्रममा विश्वास गर्ने असल पात्र खोजेको छ । तर यो देशको नेतृत्व सम्हाल्नेहरुको व्यवहारिकता होस् न नैतिकता, सत्ताको लुच्छाचुडी गरेको मात्र देखिन्छ देशलाई आमूल परिवर्तन गर्ने नाममा । करोडौं नागरिकको पसिनामा मोज गर्ने अनुहारहरुले ति ग्रामिण भेगका गरिब नागरिकहरुको कथा व्यथा कसरी बुझ्लान ? आलिसान महलमा गमलामा धान रोप्नेहरुले कृषकको मर्म कसरी बुझ्लान् ? श्रमिकहरुलाई अर्काको देशमा ६० डिग्रीको तातो मरुभुमिमा श्रम बेच्न बाध्य बनाउनेहरुलाई श्रमिकहरुको बेदना कसरी बुझोस् ? एसआराममा जिन्दगी बिताउनेले हिमाल, पहाड, तराईका अत्यन्त दुर्गम गाउँ बस्तीका नागरिकका दुःख कसरी थाहा पाओस् ? जब की सत्ताको वार्गेनिङ गर्दै सिंहदरबार, बालुवाटार र नयाँ बानेश्वरमा दिनहरु गुजारी रहेका छन् । गुन्द्रुक र सिन्कीको अचारसँग ढिडो खाने नागरिकको काठमाडौंको फाइभ स्टार होटलमा महंगा रक्सी र चिकेन, मटनको स्वाद लिनेले क्रन्दन कसरी सुनोस् । विदेशी सहयोगहरु ब्रम्हलुट गरेको छ बाटोघाटो निर्माण गरिदिने बहानामा । दुई महिनामै भत्किने कामहरु गरेर जनतालाई झुक्याउन मात्र खोजिरहेका छन् । कुनै दीर्घकालिन योजना छैन, दीर्घकालिन सोच छैन, विलासितामा जिन्दगी बिताउने सुँगुर जस्तो ठसठस गर्दैमा कसरी देशको विकास हुन्छ । विकासको नाममा बालुवामा पानी हाले जस्तो बजेट मात्र खेर जान्छ । प्रत्यक्ष निगरानीको अभाव छ । राजनीतिको नाममा वर्ण भेदी नीति अपनाउने, वर्णशंकर विदेशी बाहुन क्षेत्रीले प्रगतिको कुरा गर्नु र देश समृद्धिको सपना बाँड्नुको कुनै अाैचित्य छैन ।
देशलाई १० वर्षमा स्वर्ग बनाउने सपना देखाउँदै पार्टी खोल्ने बाहुन, देशलाई दश वर्ष नेतृत्व गर्न दिए स्वर्ग बनाउथे भन्ने बाहुनको उद्देश्य एउटै हो । काँग्रेसको बाहुनले देशको समृद्धि एमालेले गर्न सक्दैन भन्छ । काँग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ । होइन, काँग्रेलले देशको विकास गर्न सक्दैन एमालेले नेतृत्व गर्नुपर्छ । माओवादीले पनि त्यही प्रकारको कुरा गर्न छाड्दैन । राप्रपा नेपालले हिन्दू राष्ट्र बनाउने सपना बाँड्न छाड्दैन । त्यसै गरी चित्र बहादुर केसीले संघीयताको विरोध नगरी हुँदै हुँदैन । तर यी सबै पार्टीहरुको उद्देश्य भनेको एउटै हुन्छ । त्यो के हो भने पालै पालो सत्ता चलाउने । वर्षे पिच्छे नेतृत्व परिवर्तन गर्दै आलो पालो गर्ने मंगोलहरुलाई उठ्नै नदिने । एक आपसमा जोस्याइ दिने फुटाइदिने मारामार, काटाकाट सृजना गरिदिने फुटाउ अनि राज गरको नीति अपनाउनु आफ्नो साम्राज्यलाई मजबुद गर्नु यिनीहरुको उद्देश्य हो ।
राजस्थानी पोशाक दौरा (डोरा) सुरुवाल (सरुवाल) लगाउँदैमा राष्ट्रवादी बन्ने हो कि ? अन्य समुदायलाई उत्तेजित बनाउँदा राष्ट्रवादी हुने हो कि ? अधिकार खोज्ने मुक्ति चाहनेलाई दबाउँदा राष्ट्रवादी हुने हो कि ? उखान टुक्का हस्यौली ठट्यौली गर्दा राष्ट्रवादी हुने हो ? व्यवस्थाप परिवर्तनको विरोध गरेर राष्ट्रवादी ठहर्ने हो कि ? हिन्दूवादीलाई पृष्ठपोषण गर्दा या यथास्थिति सामन्ती चिन्त बोक्नेलाई राष्ट्रवादी भन्ने हो । बाहुन क्षेत्रीले भनेको राष्ट्रवादी बन्न कस्तो मापदण्ड अपनाउनु पर्ने हो । लाग्छ राम्रो काम गर्नेलाई राम्रै पनि भन्नु पर्दछ । तर त्यस्तो प्रशंसा योग्य देशका आमूल परिवर्तन र विकासका निम्ती कसले त्यस्तो योगदान गरेको छ । कुरा एकातिर व्यवहारिकता खोई ? सत्तामा बसेर सपना बाड्नु मात्र उपलब्धी हो । जनता प्रश्न गर्दछन् ।
२००७ साल देखि आजका दिन सम्म बाहुन र क्षेत्री पालै पालो सत्ता चलाउँदै आएका छन् । अरु समुदायको उपस्थिति त २०६२/०६३को जनआन्दोलन पश्चात सोझा मंगोलहरुलाई मख्ख बनाउनको लागि बाहुन क्षेत्रीको चाकरी गर्ने गीताङ बन्नेहरुलाई मात्र अल्झाइएको छ । यिनीहरुको समावेशी पनि बडो अचम्मको छ ।
देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । तस्करी नक्कली कारोबार, गुण्डागर्दी, महंगी उस्तै छ । पानीको धनी देशमा बिजुली छैन । अरु इन्धन ग्यासको के कुरा ? विपत्तीमा परेकालाई उद्धार गर्नु छैन, जनता मरुन कि बाँचुन कुनै मतलब छैन । एउटै मात्र लक्ष्य जसरी हुन्छ सत्ता टिकाउ । बाहुनवादका नायक शंकराचार्यको प्रभाव शाह कालिनमा शाहहरुको राणा कालिनमा राणाहरुको प्रभाव आधुनिक बाहुन क्षेत्रीमा अडिएको छ । आफ्नो अस्तित्व टिकाउने प्रयास मात्र बाहुन क्षेत्रीहरुले गरेका छन् । यिनीहरुको स्वार्थ भनेको आफ्नो समुदायलाई मात्र उकास्नु अरु जेसुकै गरुन भन्ने सोचाई गहिरो रुपमा रहेको छ । बाहुन नेतालाई देवत्वकरण गर्ने, पूज्ने सबैभन्दा अगाडी बाहुनको सुरक्षा गर्ने क्षेत्री पर्छन् । यिनीहरु धर्मले बाहुनसँग साँठगाँठ बढी देखिन्छ । त्यसको असर गाई राजनीति गर्नेले फाइदा उठाएको आफ्नै आँखाले छर्लङ्ग देखियो –‘एक भोट गाईलाई, एक भोट गाछीलाई, एक भोट बाच्छीलाई’ भन्नेहरु को थिए भन्दा त्यही काँग्रेसका बाहुन क्षेत्री नेता भन्न रुचाउनेहरु । जसलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको मसिया ठान्ने गर्छन् । त्यसै गरी जसले सच्चा कम्युनिष्ट भन्ने गरेका छन् । तिनै एमालेको नारा हो यो । यि बाहुनवादी चलनप्रति कृतज्ञ बाहुन क्षेत्री नेताले पालै पालो सत्ता चलाउने अन्तिम उद्देश्य राखेकै हुन्छन् । अहिलेसम्मको इतिहासलाई कोट्याएर हेर्दा एउटा सामन्ति बाहुनको हातबाट अर्को सामन्ती बाहुनको हातमा सत्ता सुम्पने काम मात्र भएको छ । यसकारण राजनीतिक स्थायीत्व पाउन नसकेको हो कि ? किनभने एउटा सिङ्गो अधिकार खोज्नेलाई किनारामा छाडेर एकलौटि देशलाई चलाएका छन् ।
यिनीहरु राम्रो राम्रो मंगोल चेलीहरु देख्न हुँदैन मंगोल चेलीहरु बलात्कारको सिकार हुनु परिरहेको छ । यिनीहरुले नै यौन हिंसा बढाइरहेका छन् । धर्मका नाममा धार्मिक अतिवाद लागू गरेका छन् । फलस्वरुप धार्मिक गुरुहरुबाट महिलाहरु यौन पिपासु बन्नु परेको वेदना यी सत्ताका भोकमरीहरुले बुझेका छन् ? बुझेको भए पक्कै पनि यस्ता श्रम लाग्दा घटना घट्ने थिएनन् । धर्मका नाममा मान्छेको बलि दिने जघन्य अपराध कसले गर्दैछ ? राज्य सत्ताका ब्वाँसाहरुकै कारण यस्तो अमानवीय घटना घट्दै छ । यिनीहरु नियम बनाउँछन् आफै कुल्चन्छन् आखिरीमा अन्धपरम्परा, सामन्ती संस्कार लाद्दै असहिष्णुता फैलाउँछन् ।
Last Updated on Wednesday, 20 July 2016 05:49
२९ दलिय गठबन्दनको २५ सुत्रिय माग सहितको अपिल
नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रियताको सवाल